विद्युत् चोर भेटिए अब सार्वजनिक मुद्दा (फलोअप) - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
विद्युत् चोर भेटिए अब सार्वजनिक मुद्दा (फलोअप)
माघ २५, २०७४ 6644 ऊर्जा खबर/ललितपुर
हुकिङ वा मिटर बिगारेर विद्युत् चोर्ने/चोराउने व्यक्ति वा समूहलाई अब सोझै सार्वजनिक मुद्दा दायर गरिने भएको छ । उपत्यकामै संगठित चोरी बढ्न थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यो अभियानमा जुटेको हो ।
चोरी गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दै कानुनी बाटोबाट विद्युत् प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि मुद्दा दायर गर्ने योजना बनाइएको प्राधिकरण लगनखेल वितरण केन्द्रका एक उच्च कर्मचारीले बताए ।
जिल्लाका आधा दर्जन बढी ठाउँमा संगठित विद्युत् चोरी फेला पारेपछि प्राधिकरणले नियन्त्रण अभियान आक्रमक बनाएको छ । दुई सातामा तीन सय घरमा अनाधिकृत हुकिङबाट बिजुली बाल्ने घरको तार नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरूबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिएको छ ।
प्राधिकरण लगनखेल वितरण केन्द्रले दुई सातादेखि दैनिक रुपमा प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रनिधिको साथ लिएर चोरी हुने स्थानमा अनुगमन गरिरहेको छ । र, चोरेर विद्युत् बाल्नेबाट धमाधम जरिवाना सहित महसुल असुल गरेको छ ।
लखनखेल वितरण केन्द्रले बनाएको टोलीले गोदावरी नगरपालिका–१२ ठेचोबाट विद्युत् चोरीमा प्रयोग गरेको पानी ताल्ने मोटर र फ्रिज जफत गरेको छ । ठूलीमाया बलामीको घरबाट फ्रिज र मंगलदास महर्जनको घरबाट पानी तान्ने मोटर नियन्त्रण गरिएको जनाइएको छ ।
उपकरण नियन्त्रणमा लिएपछि चोरहरू भागाभाग गरेको केन्द्रका एक कर्मचारीले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए । लगनखेल वितरण केन्द्रले अहिलेसम्म विभिन्न स्थानमा गरी ३० जनाभन्दा बढीलाई कारवाही गरेको छ ।
मिटर जडान गर्न आवेदन दिनेको चाङ
प्राधिकरणले आक्रमकरूपमा चोरी नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेपछि लखनखेल वितरण केन्द्रमा मिटर जडान गरिदिन भन्दै आवेदन दिनेको संख्या बढेको छ । चोरी गर्नेले मिटर जडान, क्षमता वृद्धिलगायत कामका लागि आवेदन दिएका छन् ।
दैनिक दर्जनौं व्यक्ति आवेदन लिएर आउने गरेको केन्द्रका एक कर्मचारीले बताए । ‘अभियान निकै प्रभावकारी बनेको छ, हामी चुहावट नियन्त्रणलाई तीव्रता दिइरहनेछौं,’ उनले भने । चोरी गर्ने गराउने भेटिए प्राधिकरणले अब मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।